Semalt समीक्षा: यो के हो र यसले कसरी काम गर्दछ?
प्रत्येक साना व्यवसायले आफ्नो वेबसाइट यातायात बढाउन चाहान्छ। अनलाइन व्यवसायका लागि यो उनीहरूको सफलताको आधार हो।
ठूलो प्रश्न हो "कसरी?"
तपाईं वास्तवमा काम गर्ने नि: शुल्क र भुक्तान गरिएको SEO सेवाहरूको लागि कहाँ घुम्नुहुन्छ?
ठीक छ, एउटा उपकरण जुन तपाईंको साइटको प्रदर्शन र ट्राफिकलाई एकदम चाँडो सुधार गर्न सक्दछ Semalt।
त्यसो भए यो Semalt समीक्षामा हामी तपाईंलाई यो थाहा पाउन मद्दत गर्दछौं कि यो वास्तवमै लायक छ वा छैन।
यहाँ हामीले कभर गर्ने कुराहरु:
Semalt.com के हो?
Semalt कसरी प्रयोग गर्ने
यहाँ Semalt मा, हामीसँग SEO (खोज इञ्जिन अनुकूलन) को लागि उपकरणहरूको एक सूट छ।
हामी अनलाइन व्यवसायलाई सफल बनाउनको लागि एक मिशनमा छौं, SEO मात्र होईन, तर वेब विकास, एनालिटिक्स, र भिडियो उत्पादन जस्ता सेवाहरूको साथ। (हाम्रो सेवाहरूमा पछि)।
तर हामी केवल कुनै एसईओ कम्पनी मात्र होइनौं। हामी यस उद्योगमा संलग्न मानवतालाई प्रेम गर्दछौं।
र तपाइँ हाम्रो मानव (र कछुवा) टोली सदस्यहरू भेट्न सक्नुहुन्छ, व्यवसाय विकासदेखि ग्राहकको सफलतासम्म मानव संसाधन सम्म। तपाईं प्रत्येक व्यक्तिको भूमिका के हो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो केही शौकहरू सिक्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईं हामीलाई दिन वा रात को कुनै पनि समय कल गर्न सक्नुहुन्छ। (हामी अंग्रेजी, फ्रेन्च, इटालियन, टर्की, र अन्य धेरै भाषाहरू बोल्न सक्छौं!)
त्यहाँ एक टोली सदस्य छ जुन हामी विशेष रूपमा उत्साहित छौं: टर्बो।
२०१ 2014 मा जब हामी हाम्रो नयाँ अफिसमा सरेका थियौं, हामीले टर्बोलाई पुरानो फूलको भाँडामा भेट्टायौं। अघिल्लो अफिसका मालिकले उसलाई त्यहीं छोडे।
ओह, हामीले उल्लेख गर्नु पर्छ कि टर्बो कछुवा हो।
त्यस क्षणदेखि, हामीले उसलाई हाम्रो अफिसको घरपालुवा जनावर र कम्पनी मस्कटको रूपमा अपनायौं। उहाँ अब युक्रेनमा हाम्रो स्थानमा एक ठूलो एक्वैरियममा बस्नुहुन्छ।
त्यसो भए हाम्रो टोलीका सदस्यहरूले तपाईंको लागि के गर्न सक्दछन्? हामी सबै SEO को बारेमा छौं।
खोज इञ्जिन अनुकूलन तब हुन्छ जब तपाइँले आफ्नो वेबसाइटलाई खोज परिणाममा उच्च देखिने बनाउन केही अभ्यासहरू लागू गर्नुहुन्छ। एसईओ सबै जैविक हो, भुक्तान गरिएको विज्ञापन पाउने बिरूद्ध।
त्यसोभए यदि तपाइँसँग एक वेबसाइट छ र तपाइँ तपाइँको ट्राफिक वृद्धि गर्न चाहानुहुन्छ, एसईओ तपाइँको योजनाको एक हिस्सा हुनु आवश्यक छ।
सब भन्दा लोकप्रिय खोज इञ्जिन - Google लाई मन पराउने SEO अभ्यास केन्द्रहरू। र गुगलसँग एक एल्गोरिथ्म छ जुन खोजी परिणामहरूको आधारमा यसलाई खोजीको खोजीको खोजीमा आधारित छ।
सब भन्दा आधारभूत स्तर मा, तपाईं एसईओ लाई दुई खण्डमा विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ: पृष्ठमा एसईओ र अफ पृष्ठ एसईओ।
अन-पृष्ठ एसईओ तपाईंको वेबसाइट भित्रको नियन्त्रण अन्तर्गत कारकहरू सन्दर्भ गर्दछ। यसले साइटको गति, कोड दक्षता, सामग्री गुणस्तर, र तपाईंको साइटको रूपरेखा र डिजाईन समावेश गर्दछ। यी सबै तपाइँको एसईओ प्रदर्शनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्।
अफ-पृष्ठ एसईओ मा अन्य साइटहरु बाट ब्याकलि like्क, सामाजिक मिडिया रेफरल, र तपाइँको वेबसाइट को बाहिर अन्य मार्केटिंग रणनीति जस्ता कारकहरु समावेश छन्। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण अफ-पृष्ठ SEO कारकहरूमा ब्याकलिंक्सको संख्या र ती ब्याकलिंक्सको गुण समावेश गर्दछ।
यो तपाईंको लागि राम्रो छ यदि तपाईंको ईन्डस्ट्रीमा अन्य उच्च-गुणवत्ता साइटहरू तपाईंको साइटमा लिंक गर्दछ। गुगलले मनपराउँछ र तपाईंको वेबसाईट उच्च श्रेणी गर्दछ।
जहाँसम्म, तपाईले गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नियमित आधारमा उच्च-गुणवत्ता सामग्री प्रदान गर्नु हो। एसईओ एक दीर्घ-अवधि का खेल हो।
यदि तपाईं अद्भुत सामग्री सिर्जनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ भने प्राथमिक Google रैंकिंग आउँछ। व्यक्तिले तपाइँको साइटमा लि and्क गर्दछ र अरू पठाउँदछ यदि तपाइँ उत्कृष्ट सामग्री राख्नु भयो भने।
Semalt ले SEO सेवाहरूको पूर्ण सूट प्रदान गर्दछ, दुबै भुक्तानी गरिएको र नि: शुल्क। सामान्यतया, हामी तपाइँको साइटलाई माथि र चलिरहेको र फलिफाप गर्न सक्दछौं, सबै एउटै छाना मुनि।
यहाँ हामीले प्रदान गरेका सेवाहरू छन्:
स्वचालित पदोन्नति प्लेटफार्म
संक्षेपमा प्रत्येक सेवालाई कभर गरौं। यसले तपाईंलाई के फाइदा पुर्‍याउन सक्छ भन्ने बारे राम्रो विचार दिनेछ।
हाम्रो AutoSEO प्याकेज हो जुन हामी अनलाइन व्यवसायका लागि "पूर्ण घर" भन्छौं। यस प्याकेजको साथ, तपाईं पाउनुहुन्छ:
तपाइँ तपाइँको अति उत्तम वेबसाइट बनाउनु हुन्छ। हामी Google को लागी अनुकूलन गर्दछौं।
"सेतो टोपी" SEO प्रविधिहरू केहि चीज प्रयोग गरेर, तपाईले आफ्नो यातायात केवल improve ०.99 at मा सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
AutoSEO निम्नको लागि उत्तम हो:
सानो व्यवसाय मालिकहरू
आधारभूत SEO सेवाहरूको शीर्षमा - जस्तै आन्तरिक अप्टिमाइजेसन, त्रुटि फिक्सिंग, सामग्री लेखन, लि ear्क आर्निंग, र समर्थन - तपाईं फुलसेओको साथ अधिक प्राप्त गर्नुभयो।
हाम्रो SEO टीम तपाइँ र तपाइँको व्यवसाय को लागी एक ब्यक्तिगत योजना को विकास गरीन्छ। तपाईलाई कुन कुरा उच्च स्तरको चाहिन्छ हामी हेर्छौं र तपाईको वेबसाइट सुधार्न योजना लागू गर्दछौं।
पूर्ण एसईओ को लागी राम्रो हो:
Semalt वेब एनालिटिक्स को साथ, तपाईं सक्नुहुन्छ:
तपाइँको साइट अधिक खोजनीय बनाउनुहोस्
प्रतिस्पर्धी वेबसाइटहरूमा ट्याबहरू राख्नुहोस्
तपाइँको वेबसाइट कसरी सुधार्ने भनेर जान्नको लागि तपाइँले पहिले हराइरहेको टुक्राहरू देख्नु पर्छ। हाम्रो एनालिटिक्सका साथ तपाईले सुझाव दिईएको किवर्ड फेला पार्न सक्नुहुनेछ, मान्छेहरूले के खोज्दैछन् भन्ने पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईको प्रतिस्पर्धाको गोप्य कुरा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ।
Semalt वेब एनालिटिक्स यसका लागि उत्तम हो:
हामी तपाईको लागि तपाइँको वेबसाइट बनाउन यति टाढा जान्छौं। हामी पातलो र व्यावसायिक वेबसाइटहरू सिर्जना गर्दछौं जसले आगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्दछन् र तिनीहरूलाई सही दिशामा औंल्याउँछन्।
तपाईंको वेबसाइटको रूप र गतिले तपाईंको बाउन्स रेट र औसत पृष्ठ दृश्य समयलाई असर गर्दछ। र त्यसले तपाइँको एसईओ लाई असर गर्छ।
यसैले हामीले सिर्जना गरेका प्रत्येक वेबसाइटहरू छिटो, नेभिगेट गर्न सजिलो, र पूर्ण एसईओका लागि अनुकूलित छन्।
भिडियो सर्वव्यापी छ र लगातार थप लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। यसैले तपाईंको साइटलाई अलग बनाउनको लागि तपाईंलाई पेशेवर भिडियोहरू आवश्यक पर्दछ।
भिडियोहरूले केवल तपाईंको ग्राहकहरूको मनोरन्जन र सूचित गर्दछ, तर तीनिहरूलाई तपाईंको साइटमा लामो समय सम्म राख्दछन्। र तपाइँको एसईओ रैंकिंग को लागी महान छ।
हाम्रो भिडियो उत्पादन सेवाको साथ, हामी तपाईंलाई मद्दत गर्नेछौं:
अवधारणाको विकास गर्नुहोस्
भिडियो उत्पादन गर्नुहोस्
हामी यहाँसम्म पेशेवर भ्वाइसओभर प्रतिभा प्रदान गर्दछौं!
हाम्रो भिडियो उत्पादनको लागि उत्तम हो:
इमान्दार हुन, हामी हाम्रो उत्पादनहरू र सेवाहरूको बारेमा जान सक्दछौं। त्यो किनभने हामी के गर्छौं भनेर भावुक छौं।
तर यो सुन्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ जुन हाम्रो पुरानो ग्राहकहरु हाम्रो बारे मा भने। त्यसो भए हाम्रो मनपर्ने ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया यहाँ छ ...
मालो क्लिनिकका क्रिस्टियान भन्छन, "हामीले Semalt ... तीन पछिल्लो वर्षमा राष्ट्रिय शीर्ष-रैंकिंग वेबसाइट बन्न प्रयोग गरेका छौं।" "... यदि तपाइँ स्तर निर्धारणको लागि सुधार गर्न चाहानुहुन्छ भने Semalt उत्तम सिफारिश हो।"
"मैले भन्नु पर्छ एक उत्तम एसईओ कम्पनी मध्ये एक," Msofas लिमिटेड को Wojtek भन्छन्। “मैले बहु एसईओ कम्पनीहरूको प्रयास गरें तर मैले चाहेको कुरा पाइन। तर Semalt सँग मैले अन्ततः बुझे। ... उनीहरूले बुझे कि मेरो वेबसाइटलाई के आवश्यक छ र तिनीहरूले यो मेरो व्यापारको भलाईका लागि गरे र यसले अन्ततः मेरो राजस्व बढायो। "
बाजा प्रॉपर्टीजका स्प्यानिश स्पिक जोसे भन्छिन्, “हामी आफैंको प्रबन्धक वोल्डीमिर स्काइबासँग सबै भाषाका अनुगमन फोन कलहरू, ईमेलहरू र आफ्नै भाषामा साप्ताहिक रिपोर्टहरू देखाउँदा खुसी थियौं।” "हामी हाम्रो उद्योगमा कुञ्जी शब्दहरूको धेरै मिसिहरुमा पहिलो नम्बरमा छौं र सीसाले केहि महीनामा हाम्रो ईमेलहरू ढकढक्याइरहेको छ। म वेबमास्टर हुँ हुँदाहुँदै पनि, म अझै आश्चर्यचकित हुन्छु कि यो गर्न मद्दत गर्न तिनीहरू के गरिरहेका छन्। "
स्पष्ट रूपमा, हाम्रा ग्राहकहरूले हामीलाई प्रेम गर्छन्। र हामी उनलाई फेरी नै प्रेम गर्दछौं!
एक पटक तपाईं Semalt को होम पेज मा अवतरण गरे , पहिलो चीज तपाईले देख्नु भएको एक नि: शुल्क उपकरण हो जुन तपाईको डोमेनको गुणस्तर देखाउँदछ। केवल तपाईंको यूआरएल प्रविष्ट गर्नुहोस् र "अब सुरू गर्नुहोस्" मा थिच्नुहोस्।
त्यसो गरिसकेपछि, तपाईंलाई दर्ता गर्न प्रेरित गरिनेछ। हामीले यो प्रक्रिया सकेसम्म सजिलो बनाएका छौं - केवल तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्, पासवर्ड सिर्जना गर्नुहोस् र हामीलाई तपाईंको नाम बताउनुहोस्।
तपाईं आफ्नो रिपोर्ट प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, र थप अपडेटहरू तपाईंको इनबक्समा डेलिभर गर्नुहोस्।
दर्ता गरेपछि, तपाईंलाई तपाईंको ड्यासबोर्डमा लगिने छ। यहाँ तपाईं आफ्नो रैंकिंग हेर्न, एक वेबसाइट विश्लेषण प्राप्त गर्न, र नयाँ परियोजना बनाउन सक्नुहुन्छ।
दाँया पट्टि तपाईले प्रत्येकको लागि कुञ्जी शब्द र रँकिंग देख्नुहुनेछ। तपाईं नयाँ कुञ्जी शब्दहरू पनि थप्न सक्नुहुनेछ र पूर्ण विश्लेषणात्मक कुञ्जी रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
तल बायाँ तिर वेबसाइट विश्लेषक ट्याब भ्रमण गरेर, तपाईं आफ्नो:
दैनिक आगंतुक दैनिक पृष्ठ हेराईहरू
साइटमा दैनिक समय
विस्तृत SEO जानकारी
गति र उपयोगिता
सर्भर र सुरक्षा डाटा
सुझावहरू कसरी तपाइँ तपाइँको साइट को सुधार गर्न सक्नुहुन्छ
तपाईं परियोजना केन्द्र र सम्बन्धित रिपोर्ट सिर्जना गर्न रिपोर्ट केन्द्र ट्याबमा जान सक्नुहुन्छ।
तपाईको रिपोर्टमा तपाई फिल्टर, र्याकिंग, क्रमबद्ध, र मिति दायरा थप्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईं कसरी कहिले र कहिले तपाईंको रिपोर्ट उत्पन्न हुन्छ र तपाईंलाई पठाइन्छ अनुसूचित गर्न सक्नुहुन्छ।
सबैमा सबै, तपाईं यो उपयोगी उपकरणको साथ धेरै धेरै उपयोगी जानकारी र तथ्या .्कहरू पाउन सक्नुहुनेछ।
र पक्कै पनि, तपाईं अपग्रेड गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको वेबसाइटको साथ अझ बढि मद्दत प्राप्त गर्न। त्यसो गरेर, हामी तपाईंलाई हाम्रो खोज विशेषज्ञता, स्रोतहरू, ज्ञान, र शीर्ष-खाच टोली सदस्यहरूको लागि धन्यवाद, खोज इञ्जिन परिणामहरूको शीर्षमा चढ्न मद्दत गर्न सक्दछौं।
यो Semalt समीक्षा तपाईंलाई देखाउँदछ कि यी नि: शुल्क र भुक्तान गरिएको SEO सेवाहरू तपाईंको वेबसाइट रैंकिंगमा कती सहयोगी हुन सक्छ। र तपाईको साइट को रैंकिंग राम्रो, अधिक व्यापार तपाई उत्पादन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
त्यसोभए यदि तपाईं आफ्नो एसईओ र आगन्तुक अनुभव सुधार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई सबै कोणबाट समेटेका छौं।
तपाईंको नि: शुल्क साइट रिपोर्ट प्राप्त गरिसकेपछि, तपाईं साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ, र हामी अहिले सम्पर्कमा छौं!